News Collection: हिरो ओठ चुस्ने हिरोइन हल्ला गर्ने!
हिरो ओठ चुस्ने हिरोइन हल्ला गर्ने!
आफ्नो गोप्य कुराहरू कसैले थाहा पाएर हल्ला गरिदियो भने मानिस रिसाउँछन्। समाजमा त्यो कुराले गलत परिणाम निम्त्याउला वा गलत सन्देश जाला भन्ने त्रास मानिसमा हुन्छ। तर, नेपाली सिनेमामा बिनाअध्ययन, त्याग र दुःख नगरी आएका केही नवप्रवेशी भने सिनेमा रिलिज हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो कुराहरू वा सिनेमाभित्रका दृश्यहरू गर्वका साथ बताउन पछाडि हट्दैनन्।
सविना कार्की नामकी एउटी युवती अहिले सिनेमा एटीएममा आफूले दिएका किस र बेडसिनबारे ठूलै महान् काम गरेजसो गरी बखान गर्दै हिँड्न थालेकी छिन्।
कुनै सिनेमाको शुभसाइतमा निर्देशक शोभित बस्नेतले 'सेक्सी' नायिका भनेर चिनाउँदा दङ्ग पर्ने अनि खुसी भएर स्टेजमा पुग्ने यिनै सविनाले पछिल्लोपटक एउटा सिनेमा खेलिन् 'एटीएम'। पूरै अश्लील दृश्य र संवादले भरिपूर्ण यो चलचित्रलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले रोक लगाउने निश्चित छ तर सविनाले भने यो चलचित्रमा आफूले दिएको किसिङ दृश्यबारे यसो भनिन्, 'दिनेशले कति लामो समय मेरो ओठ चुस्यो, ओठ नै सुन्नियो।' सविनाको यो भनाइ सुनेपछि अर्को सिनेमाको युनिट गलल्ल हाँसेको थियो। त्यहाँ कुरा पनि चल्यो, 'सिनेमा खेल्नका लागि न त कथा हेर्ने न त आफ्नो भूमिकाबारे जानकारी नै माग्ने उ फिल्म खेल्ने लोभमा जस्तो सिन पनि दिनेहरूको जमात बढेपछि यस्ताबाट के आशा राख्ने?'
यति मात्र होइन सविनाले त आफ्नो किसिङ दृश्यको छायाङ्कनको समयमा मिडियालाई पनि खबर गर्न भ्याएकी थिइन्। उनले त्यतिबेला भनिन्, 'आज मेरो भयङ्कर सिन छ, आउनु है उ' सिनेमामा काम गर्ने एउटी नयाँ युवतीले यस्तो आग्रह गरेपछि केही मिडियाकर्मी त गए तर सिन रहेछ त्यस्तो। उनीहरूको निचोड थियो– 'यस्ता विकृति फैलाउनेलई किन साथ दिने?' सिनेमा खेल्न पाइन्छ भने किसिङ र बेडसिनलाई सामान्य मान्ने यस्ता केही कार्कीहरूको उपस्थितिप्रति अब सिनेमाकर्मी एक हुने भएका छन्। नेपाली सिनेमाको बजारमा विस्तार हुने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्ता 'सी गे्रड'का सिनेमा निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने कुराहरू पनि चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ/संस्थाहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। गलत सन्देश प्रवाह गर्ने अनि नेपाली चलचित्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि गलत हुन् भने यस्ता सिनेमा किन खेल्छन् र किन बनाइन्छ? अचम्म छ।
सिनेमामा 'सी गे्रड'का दृश्य दिने यस्ता युवतीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिमा पनि परिवर्तन आउने निश्चित छ। आफूहरूलाई गलत दृष्टिले हेरिन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेको पाइँदैन। यद्यपि एक–दुईजना यस्ताहरूको उपस्थितिले सबै नायिकालाई यिनीहरूकै नजरले हेर्न भने मिल्दैन। किनभने जिया केसी अनि सविना कार्कीहरू नेपाली सिनेमाका प्रतिनिधि अवश्य होइनन्। यस्ताले गर्दा नै भोलि सकारात्मक सोच, मान्यता अनि धारणा लिएर नेपाली सिनेमामा आउन खोज्नेहरूको 'मुड'मा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। त्यसकारण समग्र चलचित्र क्षेत्रले यस्ताहरूलाई साथ, सहयोग अनि भर दिनुहुन्न र सेन्सर बोर्डले पनि समाजमा विकृति फैलाउने यस्ता सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाउनुपर्छ।